Vaovao - Nahazo Loka Iraisam-pirenena Iraisam-pirenena momba ny famoronana pentawards telo ny BXL Creative
Tao amin'ny "Fetin'ny Pentawards" ny 22 - 24 septambra 2020 dia nanao kabary ifotony. Anisan'ireo ny mpamorona sary malaza Stefan Sagmeister sy ny talen'ny famolavolana marika & fonosana any Amazon USA Daniele Monti.
Nozarain'izy ireo ny hevitra farany amin'ny famolavolana ary niresaka lohahevitra samihafa izay misy fiantraikany amin'ny indostrian'ny fonosana ankehitriny, ao anatin'izany ny Why Beauty Matters; Fahafantarana ny dikany ara-kolontsaina hanamafisana ny marika sy ny fonosana; Ny fahasosoran'ny endrika "Normal" sns.
Andro firavoravoana amin'ny maso ho an'ny mpamorona ity, izay tsy misy fetrany ny kanto. Amin'ny maha loka Oscar azy amin'ny indostrian'ny famolavolana fonosana eran-tany dia tsy isalasalana fa ho lasa lohan'ny fironana fonosana vokatra manerantany ireo asa fandresena.
Andriamatoa Zhao Guoxiang, CEO an'ny BXL Creative, dia nasaina hanolotra ny loka ho an'ireo mpandresy platinum!
Fifaninanana famolavolana Pentawards
Sanganasa telo an'ny BXL Creative no nahazo ny loka lehibe.
Boaty fanomezana Lady M Mooncake
Brand: Boaty fanomezana Lady M Mooncake
mamaritra: BXL Creative, Lady M
Ny varingarina fonosana dia maneho ny endrika fihaonan'ny boribory, ny firaisankina ary ny fiarahana mivory. Ireo sombin-tany valo an'ny Mooncakes (valo no isa tsara vintana amin'ny kolontsaina tatsinanana) sy ireo andohalambo dimy ambin'ny folo dia maneho ny datin'ny Fetibe amin'ny Fararano-lohataona, 15 Aogositra. Ny feo manga-manga an'ny fonosana dia entanin'ny lokon'ny lanitra amin'ny fararano amin'ny fararano mba hahafahan'ny mpanjifa miaina ny fiandrianan'ny lanitra ao an-tranony. Mandritra ny fihodinan'ny zoetrope dia manomboka manjelatra ireo kintana volamena voafitaka rehefa tratry ny taratry ny hazavana. Ny hetsika mavitrika amin'ny fizotran'ny volana dia maneho ny fotoanan'ny sendika mirindra ho an'ny fianakaviana sinoa. Amin'ny folklore sinoa dia voalaza fa ny volana no boribory mamirapiratra indrindra indrindra amin'izao andro izao, andro iray hiarahan'ny mpianakavy.
Amin'ny ankapobeny, ny fonosana vary dia ariana aorian'ny fanjifana, izay hiteraka fako. Mba hampatsiahivana ny fironana fonosana ara-tontolo iainana, ny mpamorona ny BXL Creative dia nanamboatra ny fonosana vary indray.
Mampifangaro tsara ny fiasa, ny haingon-trano ary ny famolavolana ny vokatra izy io. Retro izy io ary misy haingon-trano tena ilaina. Azo ampiasaina ho firavaka ihany koa izy io ary azo averina ahodina hanatratra ny fiarovana ny tontolo iainana.
Teraka tao amin'ny "renivohitra famolavolana" an'i Shina -Shenzhen, ny BXL Creative dia manaraka hatrany ny fitsipika fa ny famoronana sy ny fanavaozana no loharanon'ny fampandrosoana ny orinasa.
Previous: BXL Creative Packaging Guizhou Factory sonia ofisialy!